Ebe 6 na Pyrenees nke Catalan ị kwesịrị ịchọpụta | Akụkọ Njem
N’ebe ugwu nke Peninsula Iberia, n’agbata Andorra, Spain na France, Pyrenees bụ ugwu dị larịị nke gbatịrị ruo kilomita 430 site n’Oké Osimiri Mediterenian ruo Ugwu Cantabrian. Na mpaghara Catalan, na mpaghara Gerona na Lleida, ịma mma nke ala ala na obodo nta ndị dị ugwu bụ ihe ịtụnanya ịhụ n'oge ọ bụla n'afọ. Kedu ebe anyị na-akwado ka ị gaa na njem gị na Pyrenees Catalan?
3 Ogige Ugwu Alt Pirineu
6 Ogige Ntụrụndụ Cap de Creus
Vielha bụ obere isi obodo Pyrenean nke Ndagwurugwu Arán, na Lleida, nke dị na elu nke 974 mita ma gbaa gburugburu nke karịrị mita 2.000. Ọ bụ obodo dị jụụ na nke ọdịnala nke nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị bi na ndagwurugwu ahụ.
Woodenlọ osisi na okwute ya na ugwu nke odida obodo mere Vielha ebe dị ịtụnanya ịmara. Okporo ámá ndị buru ibu dị iche na ndị dị warara ma ha niile mejupụtara netwọkụ azụmahịa na-atọ ụtọ nke a raara nye ugwu na egwuregwu dị egwu n'ihi na ọ nwere ebe ntụrụndụ dị nso. Agbanyeghị, na Vielha nwekwara ọtụtụ ụlọ nri mara mma ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ nri mpaghara.
Site na echiche ọdịbendị, ụfọdụ ebe nkiri ndị njem nleta nke Vielha bụ ụka nke Sant Miquèu, ụlọ a na-ahụ anya nke ụlọ nzukọ obodo, ọfịs ndị njem nleta ma ọ bụ ụlọ post ọfịs n'ime nke bụ Kraịst nke Mijaran site na narị afọ nke iri na abụọ. Manlọ mano Ço de Rodès, Wool Museum na Museum Ethnological bụ saịtị ndị ọzọ na-akwado nleta ahụ.
Foto | Pyrenees anwansi
Na mpaghara Ripollés, nke dị na Gerona, Camprodon dị, obodo mara mma nke dị n'akụkụ Osimiri Ter na n'akụkụ ugwu bụ ebe na-adọrọ mmasị maka ndị na-agba ọsọ na njem egwuregwu, ebe ọ bụ na nso nso otutu uzo na uzo ozo iji nwee obi uto.
Obodo a dị na Pyrenees Catalan nwere mmalite ya na Middle Ages ma nwee mmasị na-adọrọ mmasị iji chọpụta. Ihe nnọchianya ya bụ Pont Nou, akwa mmiri site na narị afọ nke iri na abụọ nke ị nwere echiche mara mma mana ebe ndị ọzọ ị gara bụ ebe obibi ndị mọnk Sant Pere, ụka Santa María, ndị mọnk Carmen ma ọ bụ Paseo de la Font Nova.
Dị ka Vielha, ịdị nso ya na ọtụtụ slopps na-eme ka ọ bụrụ obodo ama ama n'oge oge oyi iji na-eme egwuregwu ndị a na-ahụ n'oge a.
Ogige Ugwu Alt Pirineu
Ọ bụ ogige ntụrụndụ kachasị ukwuu na Catalonia ekele maka ihe karịrị hectare 60.000 nke kewara abụọ na mpaghara nke ụlọ: Pallars Sobirá na Alt Urgell. Emeputara ya na 2003 iji chekwaa oke ohia nke Pylanes nke Catalan (fir, uhie na oji) na umu anumanu nke ala ya (ele, anu ohia, mgbada, ndi ozo di iche, ndi ozo na ndi ozo n'etiti ndi ozo).
Emi odude ke Lleida, enye edi kiet ke otu ata n̄wọrọnda ebiet ndika n̄kese nte ubak ufọkabasi Romanesque eke Vall de Boí. N'ime ebe a nke okike na ịdị jụụ gbara gburugburu ị nwere ike ịnụ ụtọ ikiri gburugburu ebe obibi pụrụ iche.
Banyere ọdịbendị, obodo a dị na Catalan Pyrenees nwere ọla abụọ nke nka Romeesque dịka ụka San Clemente na Santa María, ndị Unesco kwupụtara na World Heritage Sites na nke narị afọ nke iri na abụọ.
Amaara nke ọma na eserese mgbidi ahụ n'isi ụka nke San Clemente (Pantocrator, ndịozi, ndị nsọ na ihe nkiri sitere na Akwụkwọ Nsọ na Apọkalips) nke a na-ahụta dị ka ọkaibe na nka European Romanesque. Ọ dịkwa mma ịgbago n'ụlọ mgbịrịgba ya n'ihi na site na ya ị nwere ọmarịcha echiche nke ndagwurugwu.
Nke a bụ obodo ọzọ dị na Pyrenees Catalan ndị kwesịrị ileta. Ọ dị n'ógbè Gerona, nke dị nso na France na nke kwụsịrị ịbụ nke mba a na narị afọ nke iri na asaa mgbe Nkwekọrịta nke Pyrenees gasịrị.
E ji okwute rụọ ụlọ ya, dịka pavụ nke okporo ámá ya, nke na-eme ka ọ pụta ìhè. Otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya bụ gothic castle-like church of La Mare de Dèu dels Ángels, ahịa ọgwụ na narị afọ nke XNUMX, nke kacha ochie na Spain, ghọrọ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, na nnukwu ụlọ Llívia nke ị nwere ike ịhụ obodo niile na ugwu gbara ya gburugburu.
Ogige Ntụrụndụ Cap de Creus
N'ebe ugwu nke Costa Brava bụ otu n'ime ihe ịtụnanya dị ebube nke Gerona: Cap de Creus Natural Park, ọdụ ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri mbụ na Catalonia. N’ebe ọwụwa anyanwụ nke Pyrenees nke Catalan, ọ na-etolite ala nke bays, coves, nkume na okwute nke hectare 10.800 na hekta 3.000 nke oke osimiri.
Ime nke ogige a bụ paradaịs nke ala ahịhịa juru na oke ohia nke enwere ike ịmata site n'okporo ụzọ na njem mmụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ecotourism » Ebe 6 dị na Pyrenees nke Catalan ị kwesịrị ịchọpụta